ပျံသန်းနေသောခွပ်ဒေါင်းတကောင်: NLD ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့လို
ရုပ် / သံ (65)
ကျွန်တော့်၏ email လိပ်စာမှာ
လူကြီးမင်း၏ Email လိပ်စာပေးခဲ့ပါ။ Poste အသစ်တင်တိုင်း ပို့ပေးပါမည်။
NLD LA KOREA
ရန်နိုင်ထွန်း ရဲ့ ကဗျာများ
Y မြစ်ချို ... လူညံ့လိုအင်
လာရောက် လည်ပတ် ကြသော သူငယ်ချင်းများ နိုင်ငံရေး သီချင်းတွေ နားဆင်လို့ရအောင်၊ စိတ်ကြိုက် Download ဆွဲလို့ရနိုင်ဖို့ အတွက်
ဆာမူထော မူလတန်းကျောင်းအတွက် ရန်ပုံငွေ
Publish at Scribd or explore others: ဇေယျကျော် ကျောင်းသားရေးရာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် လ...
နာမည်ဆိုးဖြင့်ကြော်ကြားလာသော ဘူသီးတောင်ထောင်ပိုင်ကြီးနှင့် ထောင်ဝန်ထမ်းများ
ဘူးသီးတောင်ထောင်ထဲတွင် ဦး*သရိယ။ ကိုဌေးကြွယ်တို့အပါအ၀င် တောင်ကုတ်မြို့နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်။အတွင်းရေးမှူးနှင့် ကိုဇော်နိုင်။ ကို...
proxy တွေကို ကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုရှာမလဲ
ပြည်တွင်းက မိတ်ဆွေတွေအတွက် ကျနော်တို့ ဒီကနေ တင်ပေးလိုက်တဲ့ proxy ဆိုဒ်တွေ IP & Port ဆိုဒ်တွေကို ခဏခဏအပိတ်ခံနေရတဲ့အတွက် အခက်အခဲတွေ့နေကြပါ...
မူလစာမျက်နှာ...သတင်း ...ရုပ်- သံ ...ဓါတ်ပုံ ...ကြေငြာချက် ...ဆောင်းပါး ...နည်းပညာ
.....အမေ့ စကား..အမှန်တရားလုပ်တဲ့သူတွေကသာ ရှုံးရင်လည်းနိုင်ရမယ်၊ နိုင်ရင်လည်းနိုင်ရမယ်။အမှန်တရားအရ မလုပ်တဲ့သူတွေကတော့ ရှုံးရင်လည်း ရှုံးရမယ်၊ နိုင်ရင်လည်းရှုံးမှာပဲ။( ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ).....
NLD ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့လို
ဒီကနေ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) မှာ ကျင်းပတဲ့ အစည်းအဝေးအတွင်း ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ မှတ်ပုံတင်ရေး၊ မတင်ရေး ကိစ္စနဲ့အတူ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေ ချမှတ်နိုင်ဖို့အတွက် နေအိမ်မှာ ထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အတူ NLD ပါတီ ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦး အပါအ၀င် CEC ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင်တွေ အားလုံးနဲ့ တွေ့ဆုံခွင့်ပေးဖို့ NLD က အာဏာပိုင်တွေကို ထပ်မံ တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတဲ့ မသင်းသီရိက တင်ပြပေးထားပါတယ်။
ဒီကနေ့ NLD အဖွဲ့ချုပ်မှာ ကျင်းပတဲ့ ပုံမှန်အစည်းအဝေးကနေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အတူ NLD ထိပ်ပိုင်း CEC တို့ကို အမြန်တွေ့ခွင့်ပေးဖို့ အထူးကြေညာချက် အမှတ် ၁ ဆိုပြီး အကြောင်းကြားစာ ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ NLD ပါတီ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောပါတယ်။
[ ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ပါရန် +/- ]
“နောက်ဆုံး ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥပဒေတို့၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ရေး ဥပဒေတို့၊ လွှတ်တော်ဥပဒေတို့၊ အဲဒါတွေ ထွက်နေပြီ။ အဲဒါတွေ ထွက်တဲ့အတွက် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က နိုင်ငံရေးပါတီတခု ဖြစ်တဲ့အတွက် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ် ချမှတ်နိုင်ဖို့ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ရွှေနဲ့ အရင် CEC အဟောင်းနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ခွင့်ပေးပါလို့ ထပ်မံအကြောင်းကြားစာ ဒီနေ့ ထုတ်ပါတယ်။”
တခါ ရွေးကောက်ပွဲ မှတ်ပုံတင်ရေး၊ မတင်ရေး ကိစ္စအတွက် NLD ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင်တွေကြားမှာ မတူကွဲပြားတဲ့ အမြင်တွေ၊ သဘောထားတွေ ရှိပေမဲ့လည်း ဒီကနေ့ အစည်းအဝေးမှာ တတ်နိုင်သမျှ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေလည်း ရှိခဲ့တယ်လို့ ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောပါတယ်။
“တကယ်လို့ ဒီကြားထဲမှာ တွေ့ခွင့်မရဘူး၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆီကနေ Message လည်း မရဘူးဆိုရင်တော့ ၂၉ ရက်နေ့က နဂိုက ဆုံးဖြတ်မယ့်၊ အဲဒီအစည်းအဝေးက ဆုံးဖြတ်မယ်လို့ ပြောထားတဲ့အတွက် လောလောဆယ်တော့ အဲဒီလုပ်ငန်း ဆက်လုပ်ဖို့ပါပဲ။ နောက် ၂၉ ရက်နေ့ စဉ်းစား ဆုံးဖြတ်ရမယ့် ပါတီ မှတ်ပုံတင်ဖို့၊ မတင်ဖို့ကိစ္စကို ဆွေးနွေးကြတယ်။ ဆွေးနွေးကြတဲ့ နေရာမှာတော့ သဘောထား မတူတာကို အန်ကယ်တို့ နားလည်နိုင်တယ်။ သဘောထား တူချင်မှ တူမယ်။ သို့သော် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဆုံးဖြတ်ချက် ချတဲ့နေရာမှာ အားလုံး ညီညီညွတ်ညွတ်ဖြစ်ဖို့၊ ဒါကို ဦးတည်ပြီး အန်ကယ်တို့ ဆွေးနွေးခဲ့တယ်။”
လာမယ့် ၂၉ ရက်နေ့မှာ ရွေးကောက်ပွဲ မှတ်ပုံတင်ရေး၊ မတင်ရေးအတွက် CEC ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ နိုင်ငံတ၀န်းက CC ပိုင်း တာဝန်ရှိသူတွေ ဆုံးဖြတ်ကြမယ့် ကိစ္စဟာလည်း အားလုံး အဆင်သင့်နီးပါး ဖြစ်နေပြီလို့ ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ၂၉ ရက်နေ့မှာကိုပဲ ဆုံးဖြတ်ချက် ချက်ချင်းထုတ်ပြန်နိုင်မလား ဆိုတာကတော့ အသေအချာ မပြောနိုင်သေးဘူးလို့လည်း ပြောပါတယ်။
“အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ၊ လူတော့ အကုန်မရောက်သေးပါဘူး။ ကျနော်တို့က အဲဒီနေ့ရယ်လို့ ကျိန်းသေ မပြောနိုင်ဘူး။ အဲဒီနေ့ ဆွေးနွေးလို့ အချိန်ကုန်သွားရင်လည်း နောက်ရက်ပေါ့။ ဒါကြောင့် ၂၉ မှာ ဖြစ်ချင်လည်း ဖြစ်မယ်၊ ဒါမှမဟုတ် နောက်ရက် ကူးချင်လည်း ကူးမယ်။ ဒါကတော့ အခြေအနေပေါ်မှာ မူတည်ပြီး လုပ်သွားရမှာမို့လို့ပါ။”
NLD ပါတီရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဉာဏ်ဝင်း ပြောပြခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
တခါ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အင်းစိန်ခရိုင် တရားရုံးက ထောင်ဒဏ်ချထားတဲ့ အမိန့်အတွက် အထူးအယူခံဝင်ဖို့ ပြင်ဆင်မှုတွေ ရှိသလို ဧပြီလ ၆ ရက်နေ့ ရန်ကုန်တိုင်း တရားရုံးမှာ ရှိနေတဲ့ အမွေအမှုအပြင် အိမ်ပြင် ယာယီဝရမ်း အမိန့်ချဖို့တွေလည်း ရှိနေတဲ့အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဒီတပတ်အတွင်း တွေ့ဖို့ ခွင့်တောင်းထားတာတွေလည်း ရှိတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ( ဗွီအိုအေ )
Posted by flyingpeacock at 9:17 AM
Labels: သတင်း, ကြေငြာချက်
၁။ ငါတို့သည် နိူင်ငံတော်နှင့် တိုင်းရင်းသားပြည်သူများအပေါ် သစ္စာရှိပါမည်။
1.We Will Be Loyal To The State And Its People.
၂။ ငါတို့သည် ဒီမိုကရေစီ အရေးတော်ပုံ ခေတ်အဆက်ဆက်တွင်ကျဆုံးသွားသော အာဇာနည် သူရဲကောင်းများအပေါ် သစ္စာရှိပါမည်။
2.We Will Be Loyal To The Heroic Martyrs Who Fall In Successive Struggles For Democracy.
၃။ ငါတို့သည် အဖွဲ့ချုပ် အပေါ်သစ္စာရှိ၍ ပေးအပ်သော တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများကို ကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်ပါမည်။
3.We Will Be Faithful To The National League For Democracy And Dutifully Carry Out The Tasks And Responsiblities Assigned To us.
၄။ ငါတို့သည် ဒီမိုကရေစီနိူင်ငံတော်သစ် ထူထောင်နိူင်သည်အထိ အသက်စွန့်၍ တိုက်ပွဲဝင်သွားရန် သစ္စာဓိဌာန်ပြုပါသည်။
4.We Take This Solemn Oath To Keep On Fighting, Sacrificing Even Our Own Lives Until We Can Establish The New Democratic State.
download zaw gyi font
ကိုရီးယားရောက် မြန်မာနိုင်ငံသား ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ အတွက် သတင်းမီဒီယာ
မွန်အသင်း ( ကိုရီးယား )
.....လွတ်လပ်စွာ ၀င်ရောက်ပါဝင် ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။ .....